Shina Fidio ny tsara sakafo fanatanjahan-tena; aza mandany ny vokatry ny fanatanjahan-tena! Mpanamboatra sy ny Supplier | Bracefactory
Hatanjaho hiatrika rantsaka ambony
Hatanjaho hiatrika rantsambatana ambany
dia fehin Hatanjaho hiatrika
Hatanjaho hiatrika fe
lasitike dia fehin
Kidoro & CUSHIONS
INSOLES & fisaka sy mivelatra
Fidio ny tsara sakafo fanatanjahan-tena; aza mandany ny vokatry ny fanatanjahan-tena!
Nutrition fanampin-tsakafo aloha sy aorian'ny fanatanjahan-tena dia toy ny zava-dehibe toy ny fanatanjahan-tena mihitsy. Raha tsy atao ny mampiasa proteinina vovoka toy ny sakafo ihany no fanampin, inona no sakafo dia afaka manampy antsika hanatsara ny fampisehoana ara-batana nandritra ny fanatanjahan-tena, ary hamerina ny ara-batana hery aorian'ny fanatanjahan-tena?
Aostraliana ny sakafon-Zoe Bingley-Pullin hoy gliosida no tsara indrindra loharanom-angovo fanampin-tsakafo alohan'ny fanatanjahan-tena, ary vao mafana voaporitra, na ranom-vary rehetra biscuits koa safidy tsara. Rehefa avy fanatanjahan-tena, ny fihinanana anana fototeny toy ny karaoty sy ny ovy ve mamy manampy hery hamerenana amin'ny laoniny.
Aostraliana ny sakafon-Zoe Bentley-Pullin nilaza fa ny safidy ny sakafo dia miankina amin'ny karazana fanatanjahan-tena. Raha ianao no handeha any amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena, dia ilaina ny mihinana zavatra taloha. Ao amin'ny bilaogy, Zoe fa gliosida no tsara indrindra loharanom-angovo fanampin-tsakafo alohan'ny fanatanjahan-tena, manome ny angovo ilaina ho an'ny fanatanjahan-tena.
Iray na roa ny voankazo, ny ampahefatry mifangaro kapoaky ny voankazo maina, na dia eran'ny kapoaka vao mafana-voaporitra voankazo sy legioma ranom afaka manampy mamenoa angovo. Ankoatra izany, raha mikasa ny hanao fanatanjahantena avo-angovo toy ny weightlifting, iray na roa ny rehetra-bary biscuits, mifono mofo vary amin'ny bazana dibera na ricotta dia afaka manampy tsara kokoa hanatratra Fitness.
Toy izany koa, ny tsara aorian'ny sakafo fanatanjahan-tena no fanalahidin'ny hery indray. Manam-pahaizana milaza fa ny 30-60 minitra aorian'ny fampiasana no fotoana tsara indrindra mba hameno hery. Zoe fa aorian'ny fanazaran-tena, dia tsara ny mihinana sakafo manan-karena amin'ny gliosida ary proteinina.
Raha toa ka tsy ampy ny fotoana hanomanana sakafo, tsakitsaky haingana ny sasany dia mety ho safidy tsara, toy ny trano fisotroana bazana Koba isan-karazany, voankazo sy legioma mampihorohoro na avo-proteinina mifangaro yogurt amin'ny voankazo maina. Ankoatra izany, karaoty, vomanga sy ny fototeny hafa miampy legioma hummus na ricotta, na voahandro amin'ny atody vitsivitsy biscuits na mofo vary dia afaka manana vokany toy izany koa.
Ampiana hoe: G8, Bldg 1 Anchi Road, Jiading 201805, Shanghai
Ahoana no hiatrika folake ty dia fehin tonon-taolana?
Fidio ny tsara sakafo fanatanjahan-tena; tsy mbola ...
Dia mihemotra ny tsy maintsy taorian'ny Ankle Joint Sprain?
Efatra hevi-dehibe noho ny tongotra tsy mora ...
Fanatanjahantena lohalika Hatanjaho hiatrika , dia fehin Hatanjaho hiatrika, lumbar indray fanohanana, lasitike Sleeve lohalika, kiho andilany, Famatrarana Ankle Hatanjaho hiatrika,